UV1301A Full HD Box ကင်မရာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Minrray
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ပေါင်းစည်းထားသော HD ကင်မရာ > UV1301A Full HD Box ကင်မရာ
UV1301A Full HD Box ကင်မရာ
UV1301A Full HD Box Camera သည်ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးကြွယ်ဝသော interfaces များကိုပေးသည်။ စွမ်းဆောင်ချက်များတွင်ခိုင်မာသောအနက်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရောင်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသောကြည်လင်သောပုံရိပ်များကိုထောက်ပံ့ရန်အဆင့်မြင့်သော ISP အပြောင်းအလဲဆိုင်ရာ algorithms များပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် H.264 / H.264 + encoding ကိုထောက်ပံ့ပြီး bandwidth နိမ့်ကျသည့်အခြေအနေတွင်ပင်လှုပ်ရှားမှုဗီဒီယိုကိုရှင်းလင်းစွာနှင့်ရှင်းလင်းစေသည်။
The UV1301A Full HD Box ကင်မရာ offers perfect functions, superior performance and rich interfaces. The features include advanced ISP processing algorithms to provide vivid images withastrong sense of depth, high resolution, and fantastic color rendition. It supports H.264/H.264+ encoding which makes motion video fluent and clear even under low bandwidth conditions.
UV1201 တွင် ၁ / ၂.၈ လက်မအရည်အသွေးမြင့် CMOS အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ Resolution သည် 1920x1080 အထိရှိပြီး frame rate 60fps အထိရှိသည်။
Multiple interfaces တွေထဲမှာ HDMI, 3G-SDI နဲ့ LAN တို့ပါ။ 3G-SDI ကို 1080p60 format ဖြင့် 100m transmission အတွက်ရရှိနိုင်သည်။
ပံ့ပိုးမှု H.264 / H.264 + ဗီဒီယိုကိုချုံ့; resolution ကို 1920x1080 အထိ frame ကို 60fps အထိနဲ့ 1920x1080p channel များကို 30fps compression ဖြင့်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
ONVIF, GB / T28181, RTSP, RTMP protocols များကိုထောက်ပံ့သည်။ streaming server (Wowza, FMS) နှင့်လွယ်ကူစွာဆက်သွယ်နိုင်သော RTMP push mode; RTP multicast mode;
အမိန့်အမှတ်။ : UV1301A
1080P60 / 50/30/25 / 59.94 / 29.97,1080I60 / 50 / 59.94,720P60 / 50/30/25 / 59.94 / 29.97
အော်တို, DC drive ကို
အော်တို / လက်စွဲ / တ ဦး တည်း Push ကို / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
တောက်ပမှု၊ အရောင်အသွေး၊ ကြည်လင်မှု၊ ဆန့်ကျင်ဘက်၊ တောက်ပမှု၊ B / Wmode, Gamma curve
Dualstream output ကို
OSD settings ကိုခေါ်ရန် Up, Down, Left, Right, Ok ခလုတ်များ
၂၀% - ၉၅%
113.4mm × 62.6mm × 59.1mm
RemoteUpgrade, Reboot နှင့် Reset
ပါဝါထောက်ပံ့ရေး၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ၊ ကွင်းခတ် (ရွေးချယ်စရာ)
hot Tags:: UV1301A Full HD Box ကင်မရာ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံများရှိကုန်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ခြင်း, လက်ကားရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၊ တရုတ်၊ လျှော့စျေး၊ အနိမ့်စျေး၊
UV1201 Full HD Box Camera